06/10/2018 - Page 2 sur 4 -
Toamasina : Nifampitafa tamin’ny mponina ny Spat
Notanterahina omaly hatramin’ny anio, manoloana ny Lapan’ny Tanànan’i Toamasina ny varavarana misokatra mahakasika ny seranan-tsambo ao an-toerana sy ny fanitarana azy, izay nokarakarain’ny Société du Port à gestion Autonome de Toamasina, na Spat. Tamin’izany indrindra …Tohiny
Anosizato : Rangahy iray natsingevan’ ny rano
Akanjo manify no hita taratra teny amin’ity rangahy iray, fantatra fa nentin’ny ranon’Ikopa, ka hita faty teny Anosizato Andrefana ity. Olona sendra nandalo no nahita ny vatana mangatsiakany, ny marainan’ny zoma lasa teo, tokony ho …Tohiny
Antananarivo Renivohitra : Mbola mivangongo ny fako
Herinandro aty aorian’ny nanaovana ny hetsika « coup de poing » entina hanalana ny fako erak’Antananarivo Renivohitra dia tsy hita vokany. Hita mbola mivangongo manerana ny tanàna ny fako, izay toa tsy misy tompon’andraikitra. Ny …Tohiny
Aretina pesta : Valo ireo tranga voamarina
Niampy roa indray ny olona voan’ny pesta. Miisa valo hatreto no voamarina fa nisehoana trangana pesta tamin’ireo olona rehetra notiliana nanomboka ny 1 aogositra hatramin’ny 4 oktobra lasa teo. Pesta atodintariana ny dimy, ary pesta …Tohiny